Isampula nentengo - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Ukuzibophezela Kwethu Ukwaneliseka Kwakho Okugcwele
Ukuhambisana Nokulindela Kwakho
Isampula elithunyelwa kubathengi kufanele lifinyelele kulokho abakulindele njengoba isinqumo sabo sizoncika kwikhwalithi yaleyo sampuli. Kwa-OEM uma ubuza isampula, asishiyi itshe livuliwe ukuze siqiniseke ukuthi uthola isampula esezingeni eliphezulu elakhiwe ngokuphelele.
Ngokuvamile izindleko zincike ohlotsheni lwendwangu nobuciko bomkhiqizo. Lapho sisebenza kuphrojekthi abaklami bethu kanye nochwepheshe bavame ukwengeza zonke izindleko ezizayo nezintengo zokuncintisana zamakhasimende wakho we-you.r).
Ukwenza ngcono neziphakamiso
Kukho konke ukwakhiwa kwephrojekthi silokhu sibheke ohlwini lweziphakamiso ukwazi ukuthi yikuphi ukuthuthuka okungenziwa ekwakhiweni komkhiqizo ukuze uwenze uthandeke futhi uthengiswe.
Ukugxila kwethu okuyinhloko ukwenza umkhiqizo wakho ube nenzuzo (yakho) nekhwalithi ephezulu (yekhasimende).
Sinikeza amaklayenti ethu inkululeko ephelele yokuveza izidingo zawo futhi asho ukuthi yini ayifunayo lapho eza e-OEM. Ngemuva kwemihlangano embalwa kunqunywa ukuthi izindleko zesampula zitholakala mahhala noma ziyabuyiselwa.
Siyakuqonda ukubaluleka kwesampula njengoba kudlala ingxenye ebalulekile yokuthola izindleko nekhwalithi yomkhiqizo. Umgomo wethu ukuklama isampula yokuthengisa ngokuphelele ukuze isethwe njengezinga lomkhiqizo wonke. Kuyingxenye yomsebenzi wethimba lethu lochwepheshe ukwenza uhlu lwamazwana obuchwepheshe weqembu lokukhiqiza. Siphinde sifake ukuthengisa namaqembu e-QC emhlanganweni wethu wangaphambi kokukhiqiza ohola ngethimba lokukhiqiza futhi uhlose ukufunda ngemininingwane ye-oda lakho kanye nokucaciswa kwalo.
Ochwepheshe Beluleka Ngezinkinga Zamanani
Awudingi ukwethuka uma ukuthola kunzima ukuhambisana nentengo futhi ukhathazekile ngokufinyelela okuqondiwe.
Kuyo yonke le minyaka, i-OEM isikwazile ukukhiqiza izikhwama okungezazo zonke izigaba. Sihlala sizimisele kakhulu ukukusiza ngezinkinga zakho zentengo. Nabaqambi bethu nochwepheshe bethu abanethalente elikhulu kungenzeka ukuthi babheke izinketho eziningi okungukuthi izindwangu ezihlukile, izesekeli namacebo wokulawula intengo yephrojekthi yakho.
Kuzoba yisiqubulo sethu ukukunikeza umkhiqizo ohlangabezana kangcono nezidingo zakho.